Hora Finifnnee:'Dhagaan bu'uuraa caccabe irra deebiin boca Odaan bareedee ijaarama' - BBC News Afaan Oromoo
Hora Finifnnee:'Dhagaan bu'uuraa caccabe irra deebiin boca Odaan bareedee ijaarama'
Image copyright Milkeessaa Odaa FB
Dhagaan bu'uuraa guyyaa Irreecha Finfinnee Hora Finfinnee kaa'ame caccabuun isaa ummata Oromoota biratti komii olaanaa kaasaa jira. Biiroon Aadaaafi Turiziimii Oromiyaa qophii irreecha Hora Finfinnee keessatti gahee olaanaa bahaa tures dhimmicha dhageenyeerra jedha.
Itti Aanaan Itti Gaafatamaa Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaatti Obbo Admaasuu Waaqgaarii BBC'tti akka himaniitti, Irreechi Finfinneetti yoo kabajame bakka horichaatti galma tokko ijaaruuf jecha Biiroon Aadaaf Turizimii Oromiyaa bulchiinsa Magaalaa Finfinnee waliin tahuun dhagaa bu'uuraa kaa'anii akka ture himan.
''Lafichi jalqabuma iyyuu investimantiif baay'ee barbaadamaa waan tureeef, falmiidhaaniidha nuuf akka kennamu kan ta'e.''
Lafichi biiroo keenyaaf akka kennamu bulchiinsa magaalaa gaafannee deebii gaarii arganneera kan jedhu Admaasuun, amma kan keenya godhachuuf kaartaafi pilaanii irratti hojjechiifachaa jirraachu himu.
Dhagaan bu'uuraa maaliif caccabe?
Dhagaan bu'uuraa waan aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatu tokko irratti akka ijaaramu yaadame kaa'ame ture caccabuusaan alatti eenyu akka raawwate hinbaramne jedhaniiru Obbo Admaasuun.
Eenyu akka raawwate beekuu baannus qaamotni kana raawwachuu danda'aniifi jibba uummata keenyaa qaban akka jiran beekamaadha jedhaniiru. Amma bulchiinsa magaalaa waliin ta'uun dhagaan bu'uuraa caccabe jedhame kun irra deebiin boca Odaan bareedee akka hojjetamee xumuramuu qabu waliigalleerras jedhan.
Kunis baasii bulchiinsa magaalaa Finfinneen hojjetamee xumurama jedhan. Dhagaan bu'uuraa jalqaba kaa'ame durumayyuu xiqqoo turte kan jedhan Obbo Admaasuun, hojjetameees akka hin xumuramnedha BBC'tti kan himan.
Hojiidhaaf bakka biraa waan deddeebi'aa turaniif qaamaan dhaqanii dhagaa caccabe jedhame akka hin daawwanne himanii, xiyyeeffannoon keenya laficharratti kaartaafi pilaanii fudhannee maal irratti hojjechuu akka qabnuudhas jedhan.
Obbo Admaasuun akka jedhanitti, jalqaba lafichaatti naanna'ee dallaan ijaaramee ture. Garuu guyyaa Irreecaaf jecha dallaan irraa diigamuun namootaaf seenanii balleessaa hojjataniif karaa banusaa himu.
Kanaan duras namootni tokkummaafi milkii uummata keenyaa hin barbaanne waan gurguddaa kanaan olii yaalanii turan illeen hin milkoofneef kan jedhan Obbo Admaasuun, waan amma tahe kanas isaanumti kan raawwatan yoo tahe waan baay'ee nu raajeffachiisu miti jedhan.Haa tahu malee aggaammiin isaa maaliif akka tahe nuuf galee yeroodhaan dallaa deebisnee itti ijaaruun eeggachuufi ofii keenya bulchuu qabna jedhan jedhan.
Qaamni yakka kana hojjetes dhimma kanneen waltajjii siyaasaa keessatti xiyyeeffanaa barbaadan ta'u waan malanif isaaniif deebii kennaa ooluu irra hojii keenya irratti xiyyeeffachuun gaariidha amantaa jedhu waanan qabuuf malee gochaan isaanii hamaa tahuu isaa hubachuu dhabnee mitis jedhan Obbo Admaasuun.
Dhagaan kun caccabuu ilaalchisee Biiroo Aadaaf Turizimii magaalichaa Finfinnee gaafannus akka odeeffannoo hin qabne nutti himan. Waajjira Kantiibaa irraa odeeffannoo argachuuf bilbilaan yaaliin taasifne nuuf osoo hin milkaa'iin hafera.
Bakkichatti maaltu ijaarama kan jedhu hanga ammaatti hin murtoofnes kan jedhan Obbo Admaasuun, hayyoota waliin mari'achuun waan aadaafi seenaa uummata keenyaa irratti xiyyeeffatu tokko ni ijaarra jedhaniiru.
Bakki dhagaan bu'uuraa kaa'ame kun paarkii Irreechi Finfinnee itti gaggeefame waliin wal qabatee kan jiru ta'us, paarichaan adda tabee lafa murteessaa hoteela Gihon cinatti argamu ta'u dubbatu. Garuu wal qabatee kan deemuufi daandii qofti kan adda baasuudha jedhu.
Kana malees, bulchiinsa magaalaa Finfinneetti bakkeewwan sadii ta'utti galma aadaa Oromoo gurguddaa seena qabeessa ta'an hojechiisaa jirra jedhaniiru Obbo Admaasuun.
Irreecha 2012: gabaasa kallattii Irreecha Hora Finfinnee
Viidiyoo Irreecha 2012 - Manaa haga Malkaa: Irreecha Hora Finfinnee Lij Yaareed waliin